Fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny Advanced # 1 | Safidy Alemana
ny Nina von Kalckreuth 27. Septambra 2019, 15: 50 11 Votes
Torohevitra 1: Fiantsenana varotra faharoa
Tao amin'ny Fivarotana tànana Faharoa dia nieritreritra ny akanjo feno vovoka aho, akanjo XXL izay manitra fofona manitra. Tsy te-hampahafantatra ny tenako amin'ilay tompon'ny akanjo voalohany aho.
Saingy ankehitriny dia mahazatra ny fivarotana tànana faharoa ary na dia mafana aza. Mandany fotoana mikaroka ny maro mahita ianao ary manandrana zavatra vaovao. Ny tranombarotra sy tranokala marobe dia tsy mitafy akanjo efa tonta intsony, fa matetika amin'ny fitafiana amin'ny toe-javatra mafampana ary misy akanjo tsy fahita firy aza izay hitafy azy. Ho hitanao ny zava-drehetra avy amin'ny akanjo mankany amin'ny lobaka mavokely mangatsiatsiaka amin'izay rehetra tian'ny fonao. Ary iza no mitady!
Raha mbola te hahazo penina vitsivitsy ianao ho an'ny pataloha jeans tsy zakan'akanjo, dia afaka mitsidika ny tranokala / fampiharana centrifugal akanjo andramo io - alainao ny sary tsara ny akanjo, apetrakao an-tserasera ary iza no tia azy, afaka mindrana, mividy na amboary maimaimpoana!
Raha tsy mila izany dia tsy voatery hampitaovana ny akanjo ambany rehetra miaraka amin'ny akanjo faharoa ianao, fa mila mividy zavatra any ianao indraindray. alohan'ny Ny fametahana rojo vy amin'ny rojo vy dia misy fandraisana anjara lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana! Noho izany, mihady mahafinaritra!
Fitaovana azonao eritreretina:
Laut Greenpeace lösen sich „beim Waschen tausende Mikrofasern aus Pullis, Fleecejacken und Sportklamotten, die über den Abfluss in die Umwelt gelangen“. Wenn Ihr also das nächste mal Shoppen seid, vermeidet am besten:
Tombotsoan'ny fiantsenana varotra faharoa
+ Tsy misy fanohanana mivantana ny indostrian'ny akanjo (fanararaotan'ny mpiasa, isan'izany ny ankizy!)
+ Amin'ny fironana
+ Tsy vita ny akanjo vaovao
+ Mitsangatsangana indray
+ Mampihena / fanariana rano ny rano amin'ny famokarana
Toerana hividianana / fivarotana akanjo sy vokatra hafa
Previous article Mitovy finoana ve ny silamo rehetra? Horonan-tsary jobily
Lahatsoratra manaraka Biby avy amin'ny natiora - La Gomera